EY YARYAR OO 3 TODDOBAAD JIRA, CAAWINTA IYO KORIIN EEYAHA - EEYAHA
Ey yaryar oo 3 toddobaad jira, Caawinta iyo Koriin Eeyaha
Sassy the Ingiriisi Mastiff
Markay jiraan seddex toddobaad, cunugyaraha waxaa lagu diiryayaa dixiri khafiif ah (sidoo kale waxaa lagu diiri jiray laba toddobaad).
Eeyaha noocyada waaweyn ayaa kor u kacaya kuna socda 3 usbuuc waxaana lagu bilaabi karaa cuntada. Noocyada dhexdhexaadka ah waxay bilaabi karaan cuntada markay jiraan 3.5 illaa 4.5 toddobaad. Eeyaha ey ku ciyaaraan ee dhanka kale ah cuno maheli karaan weli maadaama ay quus karaan. Noocyada carruurtu ku ciyaaraan ma bilaabi karaan cunnooyinka ka hor da'da 4 toddobaad, 4.5 illaa 5 toddobaad ayaa lagula talinayaa.
Saddex toddobaad jira, FIRST adag. Kibble la qooyay ayaa ugu fiican ardayda maanta. Xaaladdan gaarka ah carruurta ayaan daryeelin biyo xireenka waxaana la siiyay mush. Waxay noqotey wax yar kahor, laakiin waxay u qalantay isku day tixgelin duruufaha.
Quudintu si fiican ugama socon, LOL -) Haddii ay ku ciyaarayaan cuntadooda, aad ayey u yar yihiin inay bilaabaan. Quudinta mushku looma baahna oo laguguma taliyo, inaad qashin mooyee aanad u baahnayn inaad goor hore naas ka gudubto, maxaa yeelay hooyada ayadu uma danaynayso iyaga. Ama haddii hooyadu goor hore qallajisay ama aad kobcinayso qashin, ama qashinka xajmigiisu u weyn yahay hooyada si raaxo leh ayey ugu janjeeraysaa inaad quudin karto iyaga mush, laakiin haddii kale maahan wax lagula taliyay oo loo tixgelinayo inay tahay jiritaan iskuul.
Quudinta Ey yaryar ee cuntada la qaso ka hor intaysan diyaar garoobin tan ayey la mid noqon doontaa. Ey yaryar oo daboolan cuntada. Way ku dhex socdaan oo wejiyada oo dhan ayey ka helaan oo waxay ku sameeyaan geedo wajiga ah. Sannadkii hore waxaan ogahay laba eey oo ku dhintay 3.5 usbuuc jir ka dib neefsashada boqoshaada iyo infekshan ku dhaca sambabka.
3 ilaa 5 toddobaad, iyadoo kuxiran cabirka eygaaga, qaado tayo yar oo yar yar oo yar yar oo biyo yar iyo 1 qeyb kibble ah. Qaar ka mid ah kibble waxay u baahan yihiin biyo ka badan kuwa kale. Kibble-ku wuxuu hayaa qaabkiisa oo wuu qoynayaa biyaha. Waxaad dooneysaa inaad isticmaasho biyaha inta ugu badan ee aad kari karto oo qaybaha kibbleyaasha ah ay bararaan oo aad u jilcaan. Cuntada sii eeyo yaryar oo ku dhex jira aagga wax lagu cuno, oo aan ahayn aaggooda dheriga ama aaggooda ay ku ciyaaraan . Eydu waxay awoodi doonaan inay soo qaadaan gabal kibble ah oo la qooyay oo ay cuni karaan. Haddii aysan diyaar u ahayn inay tan sameeyaan diyaar uma aha inay cunaan cunnooyinka adag.
Biyo xireenka ayaa badanaa kuu sheegi doona inay tahay waqtigii la bilaabi lahaa quudinta cunnooyinka adag ee ardayda markii aad aragto iyada oo dib u soo nooleynaysa kibiskeeda. Waa calaamad la hubo in kibble qooyay ay tahay waxa aad u baahan tahay inaad quudiso. Dhageyso dareenada biyo xireenka. Waxaan arkaa haddii aan isku dayo inaan sugo illaa 5 toddobaad inaan ku daro cuntada adag cuntadooda, biyo xireenku wuu igu garaaci doonaa maalin ama laba maalin ka hor. Tani waxay cadeyneysaa in waqtigu saxda ahaa.
Waxay ahayd jahwareer quudin ...
Sida iska cad waa inaan ku quudiyaa xilliyada kala-guurka, laga yaabee inaan isticmaalo laba fijaan.
Qoolley bay galeen oo dabaasheen waxay aad u daneynayeen inay ku dhex dabaalan cuntada, ka dibna midba midka kale ka leefleexo.
Tilmaamaha si weyn ayaa loo soo dhoweeyay ... qashin weyn, ama BIG puppy, LOL.
3da asbuuc ama markay caruurtu bilaabaan inay socdaan iyo waqtiga aad samaynaysid meel yar oo dheri ah oo ka baxsan sanduuqa whelp ku dar baaquli yar oo biyo ah. Pups waxay ubaahantahay inay bartaan sida biyaha looga dhaansado marka hore.
DIGNIIN: Marka ardaydu ay bilaabaan inay cunaan cunnooyinka adag eeyga biyo xireenka inta badan wuxuu JOOJIN doonaa baahiyahooda dheriga. Sidaa darteed ma dooneysid inaad bilowdid kibble illaa ardaydu ay sifiican u fahmaan inay u soo baxaan aagga dheriga 100% waqtiga. Eeg tababarka eeyaha eey la socdaan Habka Misty . Noocyada badankood, haddii si sax ah loo sameeyo, tani waa 3-4 toddobaad. Kadib markaad cuntada kudareyso, ciyaalku marmarka qaarkood waxay helayaan in yar ama weyn oo saxaro ah oo gadaasheeda dambe ah oo ku dhagan sida xabagta aan ka soo bixi doonin (waxaa loo yaqaan 'will-knots ama dingleberries). Tani waxay sidoo kale u horseedi kartaa dhimasho, sida aan sidoo kale aragno sannad kasta. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso badhida cunug walba 12-kii saacadoodba. Kuubiye kal hore ayaa sariirta la seexday dabool dillaacsan oo camiran habeenki oo dhan, wuxuuna qarxiyay derbiga calooshiisa. Eygan wuxuu u dhintay infekshin daran.
Ha u oggolaan in eeygu garkaaga nuugo, xitaa toban ilbidhiqsi.
Saddexda toddobaad, ardayda Ingiriisiga Mastiff waxay heli doonaan dhalo caano ari ah habeen kasta. Caawa waxaan dhalada ku daray biyo leh Pablum.
eygu wuxuu lahaa hal eey markaas wuu joojiyay
Saddexda toddobaad iyo badhka, quudintu aad bay u fiican tahay.
Cunugan yar wuxuu sifiican ugu raaxeysanayaa cashadiisa, qadar kasta oo ugu dambeeya!
Saddex toddobaad iyo badh, eydu waxay bilaabeen naas-nuujinta iyo caanaha riyaha.
Oo iyana kulligood waxay ku saxaroodaan oo ku foorarsadaan naftooda, oo ay u ekaadaan!
Eey kuuskuus ah oo saxaroonaya
Cuntada adag waxay ku yimaadaan saxaro adag. Qoob-ka-ciyaarkaaga 'pupup' saxaradiisu waa inuu ahaadaa mid wanaagsan oo adag, oo aan lahayn diif iyo inuusan ahayn shuban. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee saxaro badan oo u baahan in la nadiifiyo.
Mahadsanid MistyTrails Mastiffs
In kasta oo qaybtani ku salaysantahay sanqadh ah an Ingiriisi Mastiff , waxa kale oo ku jira macluumaad guud oo whelping ah oo ku saabsan eeyaha waaweyn. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo whel ah xiriiriyeyaasha kore. Khadadka isku xidhka ah ee hoose waxay ka sheekaynayaan sheekada Sassy, ​​oo ah Mastiff Ingiriisi ah. Sassy wuxuu leeyahay dabeecad cajiib ah. Aad bay u jeceshahay aadanaha, wayna u sujuuddaa carruurta. Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh leh leh, Sassy, ​​si kastaba ha noqotee, maahan hooyada ugu fiican eeydeeda. Iyadu ma diidin iyaga way nuujin doontaa markay bini'aadamku dusha ka saaro inay quudiso, si kastaba ha noqotee ma nadiifin doonto cunugga ama dheg jalaq uma siin doonto iyaga. Waxaad moodaa inaysan ahayn eeyoheeda. Qashinkani wuxuu helayaa caanaha hooyada oo leh isdhexgalka weyn ee aadanaha, iyadoo gacanta lagu siinayo arday kasta iyo waxa uu u baahan yahay. Soo noqoshada, ardaydu waxay noqon doonaan kuwo si heer sare ah loo dhex dhexaadin doono waxayna sameyn doonaan xayawaano caan ah, si kastaba ha noqotee shaqada ku lug leh waa wax lala yaabo. Waxay qaadataa hal abuur bixiye u heellan inuu xaaladdan caafimaad ahaado. Waad ku mahadsan tahay qashinkan ayaa sidaas leh. Akhriso xiriirada hoose si aad uhesho sheekada oo dhameystiran. Bogagga gudahooda waxaa ku jira macluumaad fara badan oo qof walba uu ku qanacsan yahay kana faa'iidi karo.
C-Qaybta Ey Cunno Weyn
Ey yaryar oo dhasha ah ... Waxaad ubaahantahay
Caawinta iyo Kordhinta Eeyooyinka waaweyn: 1 ilaa 3 Maalmood Jir
Waxyaabaha had iyo jeer uma socdaan sidii loogu talagalay (futada aan daboolanayn)
Qashinka Agoonta ee Pups (maahan qorshaha)
Korinta Ey yaryar 10 Maalmood oo Da 'ah +
Barbaarta Ey yaryar oo 3 Wiig Da 'ah
Barbaarinta Eeyaha 3 toddobaad - waa wakhti lagu bilaabo tababarka dheriga
Barbaarta Ey 4 toddobaad jir ah
Barbaarta Ey 5 toddobaad jir ah
Barbaarta Ey 6 toddobaad jir ah
Barbaarin Ey yaryar 7 toddobaad jir
Bulsho siinta Eyda
Caawinta iyo Kordhinta Eyda Cunnada Waaweyn Main
Caawinta iyo Korinta Eeyaha, ixtiraam cusub oo la helay
Waxaad Dooneysaa Inaad Tartid Eygaaga
Faa’iidooyinka iyo qasaaraha eyda isirida
Caawinta iyo Kordhinta Eeyooyinka: Da'da taranka
Taranka: (Wareegga kuleylka): Calaamadaha kuleylka
Kalandarka Uurka eeyga
Hagaha Uurka Daryeelka Uurka kahor
Eyda Uurka leh
Uurka Uurka Sawirada X-Ray
Xanniinta Muddada-Dheer ee Eyga
Qalabka Caawinta Eeyaha
Marxaladda Koowaad iyo Labaad ee Shaqada Eyga
Marxaladda saddexaad ee foosha eeyga
Mararka qaar Waxyaabaha uma socdaan sidii loo qorsheeyay
Eyga Hooyadu wuxuu kudhowaad dhintaa Maalinta 6
Caawinta Eeyooyinka Dhibaatooyinka Nasiib Darrada ah
Xitaa Hooyooyinka Wanaagsan Khaladaad Way Sameeyaan
Caawinta Eeyaha: Cagaarshow Cagaaran
Biyaha (Walrus) Ey yaryar
C-Qaybta Ey badan oo dhintay awgeed
Qeybta Qalliinka Degdegga ah Waxay Badbaadisaa Nolosha Pups
Waa maxay sababta eeyo yaryar oo ku dhintay utero badanaa u baahan yihiin c-qaybo
Caawinta Eeyaha: Sawirada qaybta C-C
Uurka Eyga Uurka leh 62
Caawinta iyo Korinta Eeyaha: Dhalashada ilaa 3 toddobaad
Barbaarta Ey yaryar: Dhallaanka Ibta Eeyaha
Pups 3 Weeks: Waqtiga la bilaabayo tababarka dheriga
Barbaarta eeyaha: Pups Week 4
Barbaarta eeyaha: Pups Week 5
Barbaarta eeyaha: Pups Week 6
Barbaarta Ey: Ciyaaraha 6 ilaa 7.5 Usbuuc
Barbaarta Ey: Ciyaaraha 8 Todobaad
Barbaarta Ey: Ciyaaraha 8 ilaa 12 Usbuuc
Caawinta iyo Kordhinta Eeyooyinka Taranka Wayn
Mastitis-ka eeyaha: Kiiska Cunnooyinka Ciyaaraha
Maxay Taranka Noocyada Carruurtu Ugu Adag Yihiin Tababbarka?
Muujinta, Hidaha iyo Taranka
Isku dayga inaad keydiso Ey sii daaya oo ah Dachshund Ey
Caawinta iyo Barbaarinta Sheekooyinka Eeyaha: Saddex Ey ayaa dhashay
Caawinta iyo Koriin Eeyaha: Dhamaan eeydu had iyo jeer ma noolaadaan
Caawinta iyo Korinta Eeyaha: Wicitaan Midwoof
Caawinta iyo Kordhinta Muddo Buuxda Preemie Puppy
Caawinta Yar ee Ubadka Da'da Uurka
C-Qeybta Eyga Sababtoo ah Uterine Inertia
Eclampsia badanaa waa u dhintaa Eyda
Hypocalcemia (kalsiyum hooseeya) eeyaha
SubQ biyo siinta Ey
Caawinta iyo Kordhinta Singleton Pup
Qashin-yar-yar oo Ey-dhaqameed ah
Ey Dhakhso ah
Ey kale oo dhicis ah
Uurka Uurka Uurka Leh
Laba Pups ayaa dhashay, Feedhka Saddexaadna waa la nuugay
CPR Waxay U Baahan Tahay Inay Badbaadiso Hal Ey
Caawinta Eeyyada Cilladaha Dhalashada
Ey yar oo leh Xuddunta Xuddunta oo lagu dhejiyay Cagta
Ey ku dhashay mindhicirada banaanka
Qashin ku dhashay Mindhicirada banaanka meydadka
Ey yar oo ku dhashay Caloosha iyo Caloosha oo ku taal Banaanka Jirka
Khaldamay, Vet Ayaa Ka Sii Dartay
Eyga oo lumiya Qashin iyo wuxuu u bilaabmaa Eeyo yaryar
Caawinta Eyga: Bixinta Hore ee Lama Filaanka ah
Eeyda ayaa cibro qaadata 5 maalmood kahor sababo la xiriira arday
Khasaaray 1 Ey, La badbaadiyey 3
Nuxurka Ey Ey
Ka saarida Dewclaw Khalad baa dhacay
Caawinta iyo Kicinta Pups: Digniinta kuleylka
Caawinta iyo Kordhinta Litter badan oo Ey ah
Caawinta iyo Kobcinta Eyda Intaad Shaqeyneyso
Caawinta Qashin yar oo Pups ah
Bogagga Sawirka ee Caawinta iyo Korinta Eeyyada
Sida Loo Helo Taran Wanaag
Faa’iidooyinka iyo qasaaraha isirka
Ey cuncun kalluun ah
Badbaadinta Ilmaha E, eey Ey Malab ah
Keydinta Ey: Quudinta Tuubbada: Kala-go'ida
Genitalia oo mugdi ku jiro eeyaha
Caawinta: Kiiska Buugga U Dhow-Buugga
Jadwalka Horumarinta Eeyaha (.xls-yada)
Eyyada Cuban Mysti: Xanniinta Muddada Buuxda - 1
Eydii Cuban Mysti: Shaqada Sheekada 2
Eydii Cuban Mysti: Shaqada Sheekada 3
Ey-yarta Cuban Mysti: Hal-Maalin-Hore Pups 4
Gaarsiin Fudud Maalin ama Labo Waqti
eyga oo wali dhutinaya qalliinka kadib
laba sano jir retriever
isku darka shaybaarka madow iyo cadaan